Eve Echoes dị ka ibi nkiri sayensị akụkọ ifo ma na MMO | Gam akporosis
EVE na-ekwughachi ugbu a na beta mepere emepe: echiche mbụ nke eluigwe na ala nke otu n'ime MMO kachasị mma n'oge niile
Eve Online enyela EVE ekwuputala ịtọ ntọala maka ihe kwesiri ịbụ otu n'ime MMO nke kacha nwee mmasị na afọ ole na ole sochirinụ. EVE Echoes abanyelarị beta maka awa ole na ole ma anyị nwalere ya iji gosi ihe ị ga-ahụ na nkeji mbụ nke egwuregwu.
Aha ọhụrụ maka gam akporo na dị anya n'onwe ya afọ ole na ole site na ọtụtụ ndị na-eme ihe n'ịntanetị na nke rush na egwuregwu ngwa ngwa, ọ bụ ezie na mgbe e mesịrị ha dị ogologo, dị mkpa karịa maka ọtụtụ egwuregwu. N'ebe a, ị ga-eji usoro ọzọ mee ihe, ebe ọ bụ na ị ga-abụ akụkụ nke igbe oghere oghere dị mkpa (yana okwu isi okwu ka e wee ghọta ya nke ọma) nke ị ga-ahụ ndụ gị n'onwe gị ma ọ bụ sonye na njikọ dị iche iche na ha amaliteworị ịmalite ịmepụta eluigwe na ala na-adịgide adịgide.
1 Onweghi MMO ozo dika nke a na ekwenti gi
2 Họrọ gọọmentị gị, tinye aha gị wee bido njem gị na EVE Echoes
3 Site na mbido mbụ: zụta ụgbọ mmiri
Onweghi MMO ozo dika nke a na ekwenti gi
EVE Echoes bu MMO puru iche. Anyi na ekwu ya nihi na o sitere na EVE Online, a MMORTS nke ewepụtara na 2003. Ee, ọ dị afọ iri na isii ugbu a, yabụ ị nwere ike ịghọta ihe kpatara anyị ji ekwu maka ụwa na-adịgide adịgide na akụnụba nke ya na nke nnwere onwe ime ihe bụ otu n'ime ihe kachasị elu ya. Egwuregwu rụrụ ọrụ ọtụtụ afọ wee bịa ugbu a n'ụdị "mkpanaka" maka ịnụ ụtọ ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa.
Ugbua na-emeghe beta, na nke ị nwere ike ịbanye na ya tupu oge eruo mgbe emechiri emechi emechi ihe na-erughi ọnwa abụọ gara aga, UWA ekwughachi na-ewetara egwuregwu nke ọma ọrụ na teknụzụ na site na mbido ị na-eku ume nke ịbanye ịbanye inyocha mbara na nnukwu oghere.
Ga-enwe ike ịbụ akụkụ nke interstellar ọgụ, enweghị atụ ngagharị, paireti, akụ nrigbu, manucfatura nke ụdị ọrụ ọ bụla, azụmahịa na usoro ọrụ ndị ọzọ na-esite na omume nke onwe ha na mkpebi nke ndị egwuregwu na-ebi puku kwuru puku sistemu nke igwe. Anyị anaghị atọkwa ụtọ n'okwu ahụ, ọ bụ ya mere. Ọtụtụ puku usoro mbara igwe ị nwere ike ịbịaru na mbara igwe gị.
Họrọ gọọmentị gị, tinye aha gị wee bido njem gị na EVE Echoes
Dị ka MMO ndị ọzọ, ị nwere ike hazie avatar gị ma mepụta ya na oyiyi na oyiyi gị. Ga-ekpebi n'etiti otu n'ime ọgbakọ anọ na nke ọzọ ma ọ bụ karịa akara ụkpụrụ nke agwa gị. Gallente, dịka ọmụmaatụ, pụtara nnwere onwe ime ihe, ebe gọọmentị ndị ọzọ na-akwalite nrubeisi karịa. Nke a ga-ekpebi akụkụ nke ịdị adị gị, agbanyeghị na okwesighi ịdị oke oke.
Mgbe ihuenyo okike nke avatar gị, ị ga-apụta na mbara igwe na ụgbọ mmiri gị nke dị n'etiti. Anyị na-adụ ọdụ ka ọ dị mkpa ịrụ niile Nkuzi. Ebe ọ bụ na ha na-egosi usoro niile ị ga-agbaso na n'elu nke ahụ ha na-eme ya na obere vidiyo na-egosi ọkwa ọ bụla nke omume ọ bụla. Ọ dị oké mkpa inwe ike ijikwa interface mara ihe niile ị nwere ike ime. Ọ bụrụ na, mee elu mee ala, ị ga-akarị ihe niile nwere ike ime.
Ee, n'ime beta dị na bekee ugbu a, so to EVE Echoes ị ga - etinye ntakịrị onwe gị ka ị ghọta ihe niile. Ka o sina dị, iji obere ndidi na oge, ị ga-enwe ike ịga mbara ala ndị ọzọ, wepụta ihe onwunwe wee banye ọgụ. Otu ihe dị mkpa bụ nlele, anya anya dị n'akụkụ aka nri nke ga-enye gị ohere ịchọta ohere na ihe ndị ahụ niile nọ n'akụkụ dị anya site n'ụgbọ gị. Anyị na-ekwu maka inwe ike ịga ọdụ ọdụ, mbara ụwa ma ọ bụ ịchọta ụgbọ mmiri ndị dị nso.
Site na mbido mbụ: zụta ụgbọ mmiri
EVE Echoes mere ka ihe dịrị anyị mfe na mbụ na mbido na a okwu nke a nkeji ole na ole anyị ga-aga ụfọdụ ọcha nke interface. Anyị ga-aga ọgụ ma ha ga-eziga anyị na ụwa ọzọ ịzụta ụgbọ mmiri ọhụrụ. N'ime menus niile mbu ị ga - enwe ike ịghọta ịdị mkpa nke azụmahịa bụ. Anyị na-ekwu maka eziokwu ahụ bụ na ị ga-azụ ụgbọ ahụ (n'agbanyeghị na ịbụ nkuzi, ọnụahịa ahụ bụ otu) n'etiti ndị ahịa dị iche iche wee kpebie ebe ị ga-aga were ya. Ọnụahịa ahụ nwere ike ịdịgasị iche dabere na njedebe, dịka ọ ga-adị na ndụ n'ezie.
Anyị na-eche ihu mbụ mbụ na-ahapụ anyị nnukwu mmetụta. Inwe ihe karịrị 100 spaceships na beta na ike iji chee na anyị na-abanye iji nyochaa mbara igwe sara mbara nke njikọta nke ọtụtụ puku ndị egwuregwu ga-eme, na-akpọ anyị ka anyị gaa n'ihu na-egwu egwu. Mana ihe ekwuru, emela ya ngwa ngwa, ebe ọ bụ na anyị na-eche ihu egwuregwu na mkpebi, azụmaahịa, nyocha ma ọ bụ aghụghọ ga-akara akara aka anyị karịa ka anyị nwere nkà na-alụ ọgụ ụdị RTS (Real Time Strategy).
Abiaala otu n'ime egwuregwu ndị a na-atụ anya site na obodo EVE na-egwu egwu maka mkpanaka, na ọbụna inwe nnukwu Galaxy nke abụọ, yabụ ọ bụrụ na ịnwalebeghị EVE ị ga-egwu ha, ma ọ bụrụ na ị gabiga ya, ị ga-enwe nnukwu ahụmịhe, ebe ọ bụ na eserese ahụ dị ebube, n'oge ahụ ọ na-aga nke ukwuu na-enweghị mmebi nke arụmọrụ yana na elu-ọgwụgwụ mobile ya anya dara oké ọnụ.
Eluigwe na ala ya
Anya dị ka ịnọ na ihe nkiri sci-fi
Ọ bụ egwuregwu pụrụ iche
Ike ịbụ onye ohi, onye ahịa ma ọ bụ onye na-achụ nta ego ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ
Omume zuru oke na beta
N'oge naanị na Bekee
Developer: Egwuregwu NetEase
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » EVE na-ekwughachi ugbu a na beta mepere emepe: echiche mbụ nke eluigwe na ala nke otu n'ime MMO kachasị mma n'oge niile
Samsung Galaxy Tab S6 5G gafere asambodo na Korea
Samsung A Galaxy A ga-abawanye na A11, A31 na A41